विचार Archives - नेपाली प्रोफईंल
viagra 50 mg tablets भनिन्छ, मानिस सामाजिक प्राणी हो । सर्बश्रेष्ठ सामाजिक प्राणी हो । मानिस भएर जन्मे पछि अनेकौ नाता सम्वन्धमा जेलिनुपर्छ , अनेकौ जिम्मेवारीको भारमा पर्नुपर्छ । यो धुर्व सत्य कुरा हो । कहिले काही मनमा विभिन्न कुराले तरंग ल्याउँछ । म…
काठमान्डौ : सबै तिर दलाली हटाउनेले जीवन बीमामा भएका दलाली ‘एजेन्ट’ लाई हटाउन सकिदैन ? निर्जीवन बीमामा नचाहिने जीवन बीमामा चाहिने दलाली र ठगिने सोझा जनाताहरु कहिलेसम्म ? सोझा जनाताका पैसा दलाली ‘एजेन्ट’ का खातामा कहिलेसम्म पठाइरहने ? यो स्तम्भकारको…
फूलको देहमा सुवास कस्ले भरिदियो? हिमालमा आभा कस्ले छर्कि्दियो? आखाको नानीमा माया कस्ले रोपिदियो? जूनमा शितलता कस्ले छरिदियो? देह यो जस्लाइ तिमी घृणा गर्छौ देह यो जस्लाइ तिमी मरणशील छ भन्छौ देह यो जस्लाइ तिमी नश्वर छ भन्छौ देह यो…
नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको समय सीमा अर्थात् गत जेठ १५ गते संघीय सरकारको बजेट संघीय संसद्मा पेस भइसकेको छ । केही दिनअघि सातवटै प्रदेश सरकारले समेतसम्बन्धी प्रदेशसभामा बजेट पेस गरिसकेका छन् । अबको समयमा संघीय सरकारको एउटा तहका रुपमा रहेका स्थानीय तहहरु… http://proyectaid.com/fr-BE/ek-2020-belgie_28-04-2020
यो देशको जनसङ्ख्या २ करोड ६४ लाख छ । १ करोड ९६ लाखले नागरिकता पाएका छन् । सोह्र वर्षमुनिको जनसङ्ख्या १ करोड ६ लाख छ । अब नागरिकता पाउन कति बाँकी छन् ? प्रश्न यहाँ छ । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा…
मेरो सरकार भनेवापत पनि जनताले आभारी हुनुपर्ने कि ? बेलायतको बुढो परम्परालाई जबर्जस्ती बोक्न गणतन्त्र…
geliefde van zeus ‘शान’जस्तो लाग्छ ।मलिक हुनुको ‘पहिचान’जस्तो लाग्छ ।कति यस्ता कमाराहरु आज पनि छन् नेपालमाजसलाई —सत्तासीनहरुको सवारीले जनताको बाटो छेकिनु पनि‘महान्’जस्तो लाग्छ !” केही दिन अगाडि एक जना वयोवृद्ध साहित्यकार मित्रले फोन गरेर भन्नुभयो, “राष्ट्रपतिका सवारीको तामझामसम्बन्धी तपाईँको लेख पढेँ । यसले…
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको सत्तरी वर्ष भएको छ । पुष्पलाल समेतका चार (पाँच ?) जनाले स्थापना गरेको यो पार्टी प्रचण्ड बहुमतका साथ अहिले सत्तामा छ । फुट र विभाजनको मार्गबाट गुज्रँदै यहाँसम्म आइपुगेको यो पार्टी आज पनि आधादर्जन बढी…
मान्छे जन्मिदै फरक–फरक क्षमता र विशेषताका जन्मिन्छन् । यसभित्र लुकेको षड्यन्त्रालाई छोडिदिँदा वर्णका अवधारणाको मूल कुरा नै जन्मँदा नै मानिस फरक फरक जन्मन्छन् । त्यसकारण तिनीहरुको समुहबद्धता पनि फरक –फरक हुनुपर्छ भन्ने देखिन्छ । कोही बौद्धिक काम गर्ने भएर जन्मिन्छन्… darts
सगरमाथा र बुद्ध, दुवै उँचाइका कीर्तिमान । एक प्राकृतिक उँचाइको प्रतिमान र अर्को विश्वमान्य दार्शनिक महात्मा । यी दुवै हामी नेपालीले जन्मजात उपहारका रुपमा पाइएका उपलव्धि, पहिचान र सम्मान । यसै त हामी पहिचानको संकटमा छौं । बडेबडे मुलुकका बीचमा… ecopayz
जति बुझ्यो उति कठिन् के हो त ? प्रश्न स्वयम्मा एउटा पहेली हो । अहिले नेपाली जनसाधारणलाई कसैले यो प्रश्न सोध्यो भने कसैले ‘कमरेड ओली’ भन्लान् कसैले ‘कमरेड प्रचण्ड’ भन्लान् धेरैजसोले सगोलमै ‘नेकपाको दुईतिहाइवाला सरकार’ भन्लान् । एकजना मनोविज्ञले प्रश्न…